Cristiano Ronaldo” Waa kaduwanahay dhamaan Cayaartoyda kale halkaana uma imaan dalxiis+Sawiro | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Cristiano Ronaldo” Waa kaduwanahay dhamaan Cayaartoyda kale halkaana uma imaan dalxiis+Sawiro
(17-7-2018) Cayaaryahanka cusub ee kooxda Juventus Cristiano Ronaldo ayaa qabtay shirkiisii Jaraa id ee u horeeyey tan iyo Markii uu sirasmi ah ugu biirey Naadiga dalka Talyaaniga isniintii waxaana uu ka sheekeeyey waxyaabo badan oo ku saabsan damaciisa ku aadan in uu sii ahaado Cayaaryahan wanaagsan.
Cristiano Ronaldo” Waan ka duwanahay cayaartoyda kale ee Caalamka waayo majirto wax da.weyn oo aan dareemayo si wanaagsan ayaan u dheeli karayaa waxaanan rabaa in aaan Guulo waa weyn halkaan ka sameeyo sidaa waxa uu ku sheegay shirkiisii Jaraa id ee uu qabtay kadib markii uu maray Tijaabo caafimaad oo uu ku baasay.
” Ronaldo waxaan aaminsanahay in Juventus tahay mid ka mid ah kooxaha ugu fiican caalamka oo dhan Go.aanka ku imidna ma ahayn mid aan si sahlan ku Gaaray aad ayaan uga fiirsaday waxaana sidoo kale igula taliyey saaxiibadeey in uu u wareego kooxda ugu Fiican Horyaalka Talyaaniga waanan Joogaa oo waa ku faraxsanahay Xaqiiqdii.
” CR7 halkaan uma aanan imaan in aan dalxiis ahaan u joogo waxaana doonayaa in aan Naadigeyga cusub ka caawiyo in ay ku Guuleystaan Champions League waxaanan u dagaalami doona sidii aan ugu soo dagaalamay kooxihii aan usoo cayaaray sida Sporting Lisbon Manchester United,iyo Real Madrid kooxahaas oo aan kula soo guuleystey Wax kasta.
Xiddiga dalka Portugal ee Ronaldo ayaa si rasmi ah ugu wareegay Juventus kadib markii ay ku iibsatay aduun lacageed gaaraya €100m waxaana uu ahaa qofkii ugu hadal haynta badnaa kubada Cagta Maalmihii lasoo dhaafay.